Soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha | Saxnimada QY
NIDAAMKA JIDINTA DHIMAN
Waa maxay tuurista dhimashadu?
Ku shubista dhinta waa habka shubista birta, kaas oo lagu garto in cadaadis sare lagu saaro birta dhalaalaysa iyadoo la isticmaalayo daloolka caaryada. Caaryada waxaa badanaa laga sameeyaa alwaaxyo awood sare leh, habkanina wuxuu la mid yahay qaabeynta duritaanka. Inta badan tuurista dhinta waa bir la'aan, sida zinc, copper, aluminium, magnesium, lead, tiin, iyo alloys sunta rasaasta iyo alwaaxyadooda. Iyada oo ku xidhan nooca shubista dhinta, waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid mishiinka shubka dhinta qol qabow ama qolka kulul
Qiimaha qalabka wax lagu shubo iyo caaryada waa sarreeyaa, sidaas awgeed habka wax-dhimista ayaa guud ahaan loo isticmaalaa oo kaliya wax soo saarka ballaaran ee tiro badan oo alaab ah. Soo saarista qaybaha dhinta-kabka ah way fududahay, taas oo guud ahaan kaliya u baahan afar tillaabo oo waaweyn, korodhka kharashka shakhsiguna aad buu u hooseeyaa. Dhimista tuurtu waxay si gaar ah ugu habboon tahay soo saarista tiro badan oo ah shubista cabbirrada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, sidaa darteed tuurista dhinta ayaa ah nooca ugu badan ee loo isticmaalo hababka shubista. Marka la barbar dhigo tignoolajiyada kale ee wax shubista, dusha sare ee wax shubista ayaa ah mid siman oo leh joogtnaansho cabbir sare.
Iyadoo lagu salaynayo habka dhinta-dhimista ee soo jireenka ah, dhawr hannaan oo la wanaajiyey ayaa dhashay, oo ay ku jiraan hab-dhimis aan dalool lahayn oo yareeya ciladaha shubista oo meesha ka saaraysa porosity-ka. Waxaa inta badan loo isticmaalaa farsamaynta zinc, taas oo yarayn karta qashinka iyo kordhinta dhalidda habka duritaanka tooska ah. Waxa kale oo jira habab cusub oo dhinta-dhimista ah sida tignoolajiyada-dhimista saxda ah iyo wax-dhimista badh-adag.
Ku saabsan caaryada
Cilladaha ugu waaweyn ee ka dhici kara habka dhinta tuurista waxaa ka mid ah daal iyo nabaad-guur. Cilladaha kale waxaa ka mid ah dildilaaca kulaylka iyo daalka kulaylka. Marka dusha sare ee caaryada ay leedahay cillado sababtoo ah isbeddelka heerkulka weyn, dildilaaca kulaylka ayaa dhici doona. Isticmaal badan ka dib, cilladaha dusha sare ee caaryada waxay keeni doonaan daal kuleyl ah.
Ku saabsan birta la shubay
Biraha loo isticmaalo shubka-dhimista inta badan waxa ka mid ah zinc, copper, aluminium, magnesium, lead, tiin, iyo alloys-ka sunta rasaasta ah. Inkasta oo birta-dhimatay ay naadir tahay, sidoo kale waa suurtagal. Biraha wax lagu shubo ee gaarka ah waxaa ka mid ah ZAMAK, aluminium-zinc alloy, iyo heerarka Ururka Aluminium ee Maraykanka: AA380, AA384, AA386, AA390, iyo AZ91D magnesium. Astaamaha biraha kala duwan inta lagu jiro tuurista dhinta waa sida soo socota:
• Zinc: Birta ah tan ugu fudud ee lagu dhiman karo. Waa dhaqaale in la soo saaro qaybo yaryar, way fududahay in la huwado, waxay leedahay xoog cadaadis sare leh, balaastik sare, iyo nolol tuurasho dheer.
• Aluminium: Miisaanka khafiifka ah, xasilloonida cabbirka sare marka la soo saaro dhejisyo adag oo dhuuban, caabbinta daxalka xooggan, sifooyinka farsamada wanaagsan, kulaylka iyo korantada sare, iyo xoogga sare ee heerkulka sare.
• Magnesium: Way fududahay in lagu farsameeyo, waxa ay leedahay awood iyo miisaan miisaankeedu sarreeyo, waana tan ugu fudud biraha la shubay ee sida caadiga ah loo isticmaalo.
• Copper: Adkeyn sare, iska caabin daxalka xooggan, sifooyinka farsamada ugu fiican ee biraha wax shubista ee sida caadiga ah loo isticmaalo, xirashada caabbinta, iyo xoogga u dhow birta.
• Lead iyo Tin: cufnaanta sare, saxnaanta cabbirka sare, waxaa loo isticmaali karaa qaybo gaar ah oo ka hortagga daxalka. Tixgelinta caafimaadka dadweynaha, daawadaan looma isticmaali karo qalabaynta cuntada iyo kaydinta. Daawaha rasaasta, daasadaha iyo antimony (mararka qaarkood ay ku jiraan xoogaa naxaas ah) ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo nooca gacanta iyo bronzing ee daabacaadda waraaqaha.
Qaybaha shubka-dhimista kuma eka oo keliya warshadaha baabuurta iyo warshadaha qalabka, oo si tartiib tartiib ah loogu balaariyay qaybaha kale ee warshadaha, sida mishiinada beeraha, warshadaha qalabka mashiinka, warshadaha elektiroonigga ah, warshadaha difaaca, kombiyuutarada, qalabka caafimaadka, saacadaha, kamaradaha, iyo maalin kasta. Hardware, iwm. Warshadaha, gaar ahaan: qaybaha baabuurta, qalabka alaabta guriga, qalabka musqusha (musqusha), qaybaha iftiinka, alaabta lagu ciyaaro, xiirashada, xargaha xargaha, qaybaha korantada iyo kuwa elektiroonigga ah, suunka suunka, kiisaska saacadaha, biraha birta ah, qufulyada, jibbaarada, iwm.
1. Tayada alaabta wanaagsan
Saxnaanta cabbirka ee wax-shubashadu waa mid sarreeya, guud ahaan waxay u dhigantaa 6 ~ 7, xitaa ilaa 4; dhamaystirka dusha sare waa wanaagsan yahay, guud ahaan u dhiganta 5 ~ 8; xoogga iyo qallafsanaanta ayaa ka sarreeya, xoogguna guud ahaan 25 ~ 30% wuu ka sarreeyaa ciidda tuurista, laakiin waa la kordhiyey Heerka waxaa la dhimay qiyaastii 70%; cabbirku waa mid deggan, is-beddelkuna waa wanaagsan yahay; waxay u dhiman kartaa tuurista kakakan ee gidaarada dhuuban.
2. Wax soo saarka sare
3. Saamayn dhaqaale oo heer sare ah
Sababtoo ah cabbirka saxda ah ee shubista-dhimista, dusha sare waa siman yahay oo nadiif ah. Guud ahaan, waxaa si toos ah loo isticmaalo iyada oo aan farsamo farsamo, ama mugga processing waa yar yahay, sidaas darteed ma aha oo kaliya hagaajinaysaa heerka isticmaalka biraha, laakiin sidoo kale waxay yaraynaysaa tiro badan oo ah qalabka processing iyo saacadaha shaqada; qiimaha wax lagu shubo waa sahlan tahay; waxa lagu dari karaa shubista dhinta iyo walxo kale oo bir ah ama aan ahayn bir . Waxay badbaadinaysaa ma aha oo kaliya saacadaha saacadaha laakiin sidoo kale biraha.
Qiimaha qalabka wax lagu shubo iyo caaryada ayaa ah mid aad u sarreeya, sidaas awgeed habka wax-dhimista ayaa guud ahaan loo isticmaalaa oo kaliya in lagu soo saaro tiro badan oo alaab ah oo dufcad ah, wax soo saarka yar yarna maaha mid kharash-ool ah.
QY Saxnaanta waxa uu waayo-aragnimo buuxda u leeyahay Geedi-socodka Kaashadaynta Die, waxana uu bixiyaa xalal kala duwan si loo daboolo baahidaada. Waxaad dooran kartaa midka ku habboon badeecadaada iyo suuqaaga ugu dambeeya. Ku soo dhawoow u soo dir sawiradaada 2D/3D si aad u heshid lacag la'aan.
Hore: Qaybaha warshadaha baabuurta
Alloy Die tuurista
Qaybaha jilitaanka Aluminium Die
Adeegyada jilitaanka Aluminium Die
Die Cast Alloys Aluminium
Qaybaha Auto Casting Die
Qaybaha Mashiinka Casting Die
Sinc Alloy Die tuurista